जुवा खेलेको अभियोगमा नौ जना पक्राउ- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
जुवा खेलेको अभियोगमा नौ जना पक्राउ
चैत्र ८, २०७६ दुर्गालाल केसी
दाङ — जुवा खेलेको अभियोगमा प्रहरीले घोराहीमा नौ जनालाई पक्राउ गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका १४ सरस्वती टोलस्थित बुढाथोकी समिर होटेलमा शुक्रबार राति कोठा भाडामा लिइ जुवा खेलिरहेको अवस्थामा २ लाख ८९ हजार १५ रुपैयाँ नगदसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीले बताएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा घोराही १० का ४३ वर्षीय मलबहादुर डाँगी, ३८ वर्षीय हरिबहादुर विक, ३८ वर्षीय धनबहादुर वली, घोराही १८ का २७ वर्षीय प्रेम पुन, २७ वर्षीय आकाश लम्साल, घोराही १० का ४० वर्षीय दोर्णबहादुर महरा, घोराही १४ का ५० वर्षीय गुमानसिंह डाँगी, घोराही १२ का ३१ वर्षीय टपेन्द्र विष्ट र घोराही ११ का ३२ वर्षीय अनिल विक छन् । उनीहरुबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड्काले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ १५:४४
चैत्र ८, २०७६ विप्लव प्रतीक
बडो सजिलो थियो, राजाको पछिपछि लागेर मञ्चमा आउने, ठिंग उभिने । राजाको संवाद सिद्धिएपछि लुरुलुरु राजाको पछि लागेर ब्याक स्टेजमा जाने । नाटक हेर्ने अभिलाषा रहिरहे पनि खेल्ने लालसाको लीला भने त्यहीँ टुंगियो ।
समय गुज्रिँदै गयो । म सिनेमा निर्माणतिर लागेँ । पत्रकारितामा प्रवेश गरेँ । समयको अन्तरालमा नाटकविमुख हुँदै गएँ म । नाटकमा सुनील पोखरेलको उदयपछि फेरि बौरियो नाटकमोह । म गुरुकुल नियमित जान्थेँ । अनुप बराल र सुनीलका नाटक हेरेपछि मैले नाटक र साहित्यको साइनो बडो गम्भीरतापूर्वक बुझ्न थालेँ । म कोठामा लेख्थेँ कविता, उनीहरू मञ्चन गर्थे कविता । एक्लै कविता कोर्नु र समूह मिलेर कविता लेख्नुको बडो महत्त्वपूर्ण अर्थ छ । यही क्रममा नाटक र नाट्यकर्मीहरूसँग कतिखेर माया बस्यो मलाई याद छैन । गुरुकुल गयो । नयाँ नाटकघरहरू आए ।
नयाँ नाटकघरमध्ये ‘मण्डला’ बाट मलाई एक दिन एउटा अवसर आयो । हिन्दुस्तानी साहित्यकार मन्नु भण्डारीको ‘महाभोज’ लाई अनुवाद गर्ने । नाट्यज्ञानी, साहित्यपारखी र कलाअनुरागी मेरा प्रिय भाई अनुपले सुझाएका थिए मेरो नाउँ । किन सुझाए उनै जानून् । नाटक मेरो प्राणवायुमध्ये एक हो । त्यसैले यो मेरा लागि महत्त्वको अवसर थियो । नाटकको झन् करिब पुग्ने अवसर । कुनै दिन आफैँले नाटक लेखेछु भने त्यसका लागि अभ्यासको योभन्दा अर्को सुयोग के हुन्थ्यो ?
दिनको आठ घण्टा काम गरेपछि एक महिनाभित्र नाटक उल्था मात्र भएन, त्यसलाई नेपाली समाज र समकालीन समय सान्दर्भिक बनाउन कतिपय ठाउँमा संवाद पुनर्गठन पनि भयो । अनुपले साढे तीन घण्टाको नाटकलाई दुई घण्टा पन्ध्र मिनेटको बनाउन उलटपुलट गरे, काँटछाँट गरे । नाटकको टेक्स्ट तयार भयो ।
त्यसपछि अनुपको अर्को प्रस्ताव आयो— नाटकको सुरु र अन्तिम अंकका लागि गीत लेखिदिने । त्यसबाहेक एक दृश्यपछि अर्को दृश्यमा जान सेतुका रूपमा गीत राख्ने विचार पनि फुरेछ उनलाई । तीनपटक पुनर्लेखनपछि पहिलो गीत तयार भयो, सेतु गीतहरूलाई खासै समय लागेन । किनभने कथा मेरो दिमागमा भर्खर कुँदिएको थियो । अन्तिम गीतका लागि पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपरेन । निरंकुशताको विरोधमा जोसँग काँधमा काँध मिलाएर जुधेका थियौँ, तिनीहरू नै निरंकुश बन्न पुगेको शूल मनमा गहिरोसँग गढेको थियो । आहत हृदयबाट गीत फुर्न धेरै बेर लागेन ।
अब म छुट्टी मनाउने विचारमा थिएँ— कतै यात्रामा निस्किने र एक महिनापछि आएर नाटक हेर्ने । एक्ट वन सिद्धिएको थियो । तर, एक्ट टुमा हुने घटनाबारे बेखबर थिएँ म । अनुपले अर्को प्रस्ताव राखे— नाटकमा एकजना पात्रको भूमिका निर्वाह गर्ने । सातो गयो मेरो । संवाद कसरी कण्ठ पार्ने ? ब्लकिङ कसरी याद गर्ने ? कहिल्यै नगरेको काम गर्न सक्ने आँट ममा तुरुन्तै आएन । नाइँ भन्न नजान्ने मैले बडो मिहिनेत गर्नुपर्‍यो, अनुपसँग नाइँ भन्न ।
मैले पहिलो दिन नाइँ भनेँ । दोस्रो दिन फकाएँ । अनुपले टेरेनन् । रिहर्सल आधाउधी सिद्धिएताका अलि जोडले नाइँ भन्न पुगेछु अनुपलाई, ‘मैले अभिनय गर्दा अभिनयलाई हल्का रूपमा लिएको नहोला र ? कत्रो साधना र अभ्यास गर्नुपर्छ कलाकार बन्नलाई !’ उनले भने, ‘तपाईंले उल्था गर्नुभयो, गीत लेख्नुभयो । नाटकको प्रसेस त्यतिले बुझिँदैन । तपाईंले अहिले यो रोल गर्नुभयो भने प्रसेस बुझ्न पाउनुहुन्छ । अर्कोपल्ट मौका आउला नआउला ।’ मसँग उत्तर थिएन । नाइँनाइँकै बीचमा रिहर्सल गरिरहेँ, भनेको मानेजस्तो गर्ने र अन्तिममा आएर फुत्किने मेरो दाउ थियो । शोको दुई दिनअघि दिया मास्के कोरियोग्राफ गर्न आएकी थिइन् । मैले आशाको अन्तिम किरण देखेँ । ‘दिया, तिम्रो सोर्स लगाएर नाटकमा मलाई नखेलाउन अनुपलाई भनिदेऊ न प्लिज,’ मैले गुहारेँ । ‘मेरो अरू कुरा सुन्नुहोला तर, नाटक बनाउँदा एकपल्ट अनुप सरले निर्णय गरेपछि कसैको कुरा सुन्नुहुन्न । सरी,’ दियाको जवाफले म लल्याकलुलुक भएँ । अब मैले स्टेजमा उत्रिनुको विकल्प थिएन । धन्न, हरेक दिन संवाद रटिरहेको थिएँ ।
आखिर शोको दिन आयो । मैले आफ्नो काम त्यस दिनका लागि फत्ते गरेँ । कहीँ कुनै संवाद बिर्सिनँ । तर, अन्तिम संवाद बोलिसकेपछि खुट्टा लगलग काम्यो । ममा परेको बत्ती ननिभुन्जेल उभिनुपर्ने थियो । बडो यत्नले जति कामेको छ, त्यतिमै थुम्थुम्याएँ कम्पनलाई । पहिलो शो सिद्धियो । अब उनन्चालीस शो बाँकी थियो । एक जना साथीले पर्सिपल्ट फोनमा भन्यो, ‘तँ कवितैमा ठीक छस्, अभिनय नगर् ।’ डराएको मनलाई बल्लबल्ल थुम्थुम्याएको थिएँ, त्यसले अर्को अट्याक भेट्यो । म कलाकार बन्न खोजिरहेको थिइनँ, नाटकको प्रसेस बुझ्ने बाटोमा थिएँ । उसलाई मैले सम्झाउन सकिनँ । नाटकमा जान उत्साह मर्‍यो । तर, अचानक खेल्दिनँ भन्नु परिपक्व विचार लागेन मलाई । त्यसैले मैले साथीसँग भएको संवादलाई बल गरेर बिर्सिदिएँ । नाट्यात्रा जारी रह्यो । स्टेजभित्र छिर्दा मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो । बिस्तारै हुन छाड्यो । संवाद बोल्न थाल्दा ढुकढुक हुन्थ्यो, त्यो पनि हुन छाड्यो । एक हप्ता बित्यो । मेरो भागमा छपल्ट बोल्नुपर्ने लामालामै संवादहरू थिए, एक दिन अन्तिम संवाद झ्याप्पै भुलेँ । रमेश बुढाथोकीजीले सम्हालिदिनुभयो । मैले संवाद बिर्सिएको उहाँले चाल पाउनुभएछ । त्योबाहेक सात दिनमा कुनै अनिष्ट भएन । सातौँ दिनको प्रदर्शनपछि मैले भाइ राजन खतिवडालाई भनेँ, ‘भाइ म सिकिस्त बिरामी भएँ भने त जगेडा आर्टिस्टलाई खेलाउँछौ होला नि !’ सदा विनम्र रहने राजन त्यस दिन केही कुराले अलि इरिटेट भएको थियो कि ‘दाइ यस्तो कुरा नगर्नुुस् है तपाईं अब’ भन्यो ।
भोलिपल्ट अप्रत्याशित कुरा भयो । मेरो स्वर सुक्यो । सासले मात्रै बोल्ने भएँ म । अझ कागजमा लेखेर कुरा गर्नुपर्लाजस्तो । मलाई लाग्यो चिठ्ठै पर्‍यो, म बिहानै मण्डला गएँ । मेरो हालत साउतीमा सुनाएँ । पहिलो खेप त सुन्नेले पत्याएन । अनुप स्याङ्जामा सुटिङ गर्दै थिए । चारैतिर हलचल मच्चिएको अवस्था थियो । म भने मख्ख थिएँ, अब काम गर्नु नपर्ने भयो । नयाँ कलाकार खोजिन्छ । उसले दुई–चार शो गरेपछि मैले अवकाश लिने अवसर पाउँछु ।
तर, सोचेजस्तो भएन । मेरो दृश्य भएको ठाउँलाई स्वाट्ट हटाएर नाटक देखाउने, म निको भएपछि, मैले नै आफ्नो रोललाई निरन्तरता दिनुपर्ने अनुपले निर्णय लिए । मैले नाटक खेल्नबाट फुत्किने मौका पाएँ भन्ठानेको त्यही मौकै पासो बन्न पुग्यो । सात दिनपछि म नाटक गर्न तयार भएँ, हुनुपर्‍यो । हरेक दिन अभ्यास गरेकाले संवादमा समस्या भएन । अर्को दिन गजब भयो, तेस्रो संवाद बोल्ने बेलामा ब्ल्याङ्क भयो दिमाग । भएभरको संवाद बिर्सिएँ । तर, एक सेकेन्ड पनि ढिलो नगरी नाटकमै नभएको संवाद अचानक मुखबाट फुस्कियो, ‘अचम्म छ बा’ । यो मैले आफैँप्रति गरेको प्रश्न थियो, गाली गरेको थिएँ आफैँलाई, संवाद बिर्सिएकोमा । तर, फेरि अर्को अचम्म भयो, भएभरको संवाद रिट्ठो नबिराईकन खरर्र दसम्झिएँ । ‘अचम्म छ बा’ भन्ने संवाद पनि मिल्न पनि पुगेको थियो संयोगवश । बडो आनन्द आयो त्यो दिन । तर, त्यसपछि मैले कुनै पनि शोमा ‘अचम्म छ बा’ भन्नुपरेन ।
रमाइलो के भने, हरेक दिन नौलोनौलो अनुभव हुन्थ्यो । त्यो सबै लेखेर यहाँ साध्य छैन । मैले बिर्सिनु नहुने के भने नाटकका अरू सारा कलाकारहरू मलाई दिनहुँ एनर्जी दिन्थे । ‘आज गज्जब गर्नुभो’, ‘आज कडा गयो है’ भन्नेजस्ता कम्प्लिमेन्ट दिन्थे । मेरा सबै सहकर्मीले मलाई लगाएको त्यो गुण मैले प्रसेस बुझ्न अनुपको प्रस्ताव नमानेको भए कहाँ अनुभव गर्न पाउँथेँ ? थियटरभित्र हुने सद्भावसँग कहाँ हुन्थ्यो मेरो साक्षात्कार ? अन्तिम चारवटा शो गर्ने बखतसम्म त ममा कहीँ नभएको आत्मविश्वास आइसकेको थियो । नाटक कहिल्यै नसिद्धियोस्जस्तो भइसकेको थियो । तर, के गर्नु, जे सुरु हुन्छ त्यसको अन्त्य निश्चित छ ।
‘महाभोज’ को यात्रा सिद्धियो । सबै आआफ्ना काममा व्यस्त भए । तर, केही महिनापछि अनपेक्षित खबर सुनेँ । भारत रङ महोत्सवमा सामेल हुन हाम्रो ‘महाभोज’ पनि छानिएछ । भारतीय नाट्य विद्यालयको आयोजनामा बर्सेनि हुने महोत्सव नाट्यकर्मीहरूको निम्ति तीर्थ हो । त्यहाँको रंगमञ्चमा नाटक देखाउन पाउनु रोमाञ्चक सपना हो नाट्यकर्मीका लागि । म फेरि संवाद रट्न थालेँ । अनुपको अगाडि रिहर्सल भयो । मैले जसरी बोल्दै आएको थिएँ, त्यो शैलीलाई उनले बदल्न लगाए । पहिले म खर्रर संवाद बोल्थेँ, शब्दको अर्थ खुल्ने गरी बोल्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यही प्रसेसमा बुझ्ने मौका मिल्यो ।
पैँतीस जनाको जम्बो टोली जोगबनीबाट जाँदै थियौँ । यस मौकामा विराटनगरवासीलाई पनि यो नाटक हेर्नबाट किन वञ्चित गर्ने भनेर मण्डला र निर्देशकको मन मिलेछ । तीन शो भयो गुरुकुलमा । गन्तव्य दिल्ली थियो, त्यसपछि देहरादुन । लक्ष्यको चासो नराखी यात्राको आनन्दमा रमाउने मेरो मन पुलकित थियो । मानिसको जीवनमा रिवार्ड अनेक रूपमा आउँछ । ‘महाभोज’ को दिल्ली यात्रा मेरा लागि त्यस्तै रिवार्डमध्ये एक थियो ।
८ फेब्रुअरी २०२० मा हामी दिल्लीमा थियौँ, ९ तारिखको साँझ श्रीराम सेन्टरमा हाम्रो शो थियो । हामी सबै दिउँसै पुगेका थियौँ, सेट र रिहर्सलको काम सिध्याउन । त्यो भव्य भवन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अडिटोरियम, ग्रिन रुम र स्टेज देख्दा मन फक्रियो । र, तुरुन्तै ओइलायो पनि । हाम्रो राजधानी सम्झिएँ । कहीँ एउटा गतिलो हल छैन नाटकका लागि, कन्सर्टका लागि । सर्कस देखाउन बनेको एकेडेमीको हल, अप्ठ्यारो सिट भएको र बेढंगी तरिकाले बनेको राष्ट्रिय नाचघरका हलहरू र हल भन्ने नाउँ मात्र भएको राष्ट्रिय सभागृहको अनइन्जिनियर्ड अडिटोरियम आँखामा नाचे । भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हाम्रा गणतान्त्रिक नेताहरूले वर्षौँदेखि हड्पेर राखेका छन्, जहाँ पहिले कन्सर्ट पनि हुनेगर्थ्यो ।
नाटक सिद्धिएपछि प्रेक्षालयमा आउँदा सरप्राइज थियो मेरा लागि । राज्यसभा टेलिभिजनका टेलिभिजन प्रस्तोता सैयद इरफान हेर्न आएका रहेछन् । नाटकको उनले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । अनुप, दिया, राजन, म र मण्डला टिमका निम्ति उनीसँगको संवाद बडो प्रिय रह्यो । र, विशेष गरी म सधैं सम्झिनेछु दिल्लीमञ्चनलाई, किनभने कसमसले मलाई त्यस ठाउँमा बडो यादगार उपहार दियो– मेरो जन्मदिनको दिन ९ फेब्रुअरीमा म भारत रङ महोत्सव मनाउँदै थिएँ मेरा सहकर्मीहरूसँग श्रीराम सेन्टरमा ।
धन्यवाद अनुप, मलाई प्रसेस बुझ्न स्मरणीय अवसर दिएकोमा । बिर्सिन्छु कि भनेको दिनमा सब सम्झिने, आज बबाल गरेर देखाइदिन्छु भनेको दिनमा न्याउरो मुख लगाएर ब्याक स्टेजमा फर्किनुपर्ने र हरेक दिन नौलो ज्ञान फेला पर्ने के रहेछ यो नाटकको प्रसेस ? ममा बचेखुचेका अहंकार पखाल्नुपर्छ भन्ने चेत जगायो त्यो प्रसेसले । रहेका रहलपहल रिस रित्याउनुपर्छ भनेर सिकायो प्रसेसले । मभित्र गुँड लगाएको मायालाई झन् हुर्काउनुपर्छ भन्ने सुझायो प्रसेसले । सद्भाव, सामूहिक सहयोग र कलाकारबीच एकापसमा बाँडिने केयरिङ थप सिकाइदियो ‘महाभोज’ को यात्राले । नाटक मनोरञ्जन होइन भनेर थाहा थियो, नाटक चिन्तनको एउटा ‘टुल’ हो भन्ने पनि थाहा थियो । तर, पढेर पाएको सूचना थियो त्यो । परेर, प्रसेसमा छिरेर पाएको चाहिँ ज्ञान थियो ।
भोलिपल्ट हामी देहरादुन हिँड्यौ । अन्तिम शो जो गर्नु थियो । देहरादुनको थिएटर पनि उत्तिकै दामी थियो । आज यहाँ ‘महाभोज’ को अन्तिम प्रदर्शन हुनेछ । आजपछि फेरि महाभोज हुनेछैन यही समूहबाट । मनमा केही उदासी थियो, तर शोका निम्ति एनर्जी कायम राख्नु पनि जिम्मेवारी थियो । हामी सुरु भयौँ । पालो आयो मेरो स्टेज छिर्ने र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने । ठाउँपिच्छे फरक हुन्छन् मञ्च । फरक मञ्चमा फरक अनुभव हुन्छ । यहाँ मञ्चभित्र छिर्ने ठाउँमा लाइट दिन बिर्सेका रहेछन् । बल्लबल्ल ढोका फेला पारेँ । भित्र छिर्दा संवाद बोल्ने समय हुनै लागिसकेको थियो । हत्त न पत्त आफ्नो कुर्सीमा गएर बसेँ । लाइट आधा मात्रै पर्ने ठाउँमा कुर्सी हतारमा राखिएको रहेछ । अलि अप्ठ्यारो भयो । बत्ती बल्नेबित्तिकै संवाद सुरु गरेँ । दोस्रो संवाद बोल्नुपर्ने ठाउँमा बीचको संवाद बिर्सिएँ । त्यतिखेर चिन्तित हुने फुर्सद थिएन, हुँदैन । बिर्सेको संवादलाई मिलाएर बाँकी संवाद ठीकठीक बोलेर आफ्नो काम तमाम गरेँ । ब्याक स्टेजमा आएर लामो सास फेरेँ ।
हाम्रो ‘महाभोज’ सिद्धिएको थियो । तर, एकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक विभिन्न सरकारहरूबाट गरिब, उत्पीडित र निमुखाहरूले वर्षौँवर्षदेखि भोग्दै आएको उपेक्षा र विभेदको महाभोज चलिरहनेछ ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ १५:२९